China zangaphandle Anti-umhlwa Wood WPC Ulenze Decking abenzi kunye nabathengisi | ULihua
Ngaphandle kwe-Anti-corrosion Wood WPC Decking Hollow
Ubunini beemveliso: WPC ukuthoba
Into No: LH146H24
Intlawulo: TT / LC
IxabisoI $ 2.2.7 / M
Imvelaphi yemveliso: China
Umbala: Umsedare, amalahle, uBomvu oBomvu, Ngwevu, itshokholethi okanye wena
Ukuhambisa iZibuko: Izibuko laseShanghai
Ixesha lokukhokhela: 10-18 IINTSUKU
I-WPC Decking yangaphandle
2690g / m
2.9m 3.6m okanye wena
Ipaki, Igadi, Ukudada kakubi
Isanti / Bhodi ebhalwe
● Ukuhonjiswa kweWPC Eyona nto iphambili yi-PE, imicu yeenkuni kunye nezongezo. Ukuhonjiswa kweWPC yethu kuyathandwa kwihlabathi liphela njengoko sisebenzisa izinto zendalo.
● Ukuhonjiswa kweWPC yethu intle kwaye intle ubunjani bomthi wokutya okuziinkozo, uchukumise ufakelo olulula, ngaloo ndlela unokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.Ingachetywa, ibethelelwe, igrunjwe kwaye isikwe ukuze ilungele izincedisi zeenkcukacha ezahlukeneyo, ezinje ngomhlaba, igadi yangaphandle, ipaki, ivenkile enkulu, njl.
● Ukuhonjiswa kwethu kwe-WPC kulungele ukusingqongileyo, kunokuphinda kusetyenziswe kwakhona kwaye akukho enye ikhemikhali eyingozi, ayifuni ukupeyinta, akukho glu kunye nolondolozo olusezantsi.
● I-Decking yethu inesimo sezulu esifanelekileyo, inokuba ilungile ukusuka kwi -40 ukuya kwi-60 ℃ .Ukuhlobisa i-WPC yethu kunokusetyenziswa kwihlabathi liphela.Ngenxa yokuba iibhodi zethu zinokumelana nemozulu, zichasene nesiliphu, zincinci iintanda, i-warp, zinganxibanga zihlangu. .Plus UV additive yenza iibhodi zethu ukumelana UV, fade ukumelana kunye durable.Good dimension uzinzo nxamnye ukufuma kunye nobushushu.
EN 15534-1: 2014 Icandelo6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.4
Ulwalathiso lobude: Kuthetha i-72, iMin 70 Isalathiso esithe tyaba: Kuthetha i-79, iMin 78
Isiliphu Resistance Emanzi
Ulwalathiso lobude: Kuthetha i-46, iMin 44 Isalathiso esithe tyaba: Kuthetha 55, Min 53
Ukuwa kokuchasana nefuthe lobunzima
EN 15534-1: 2014 Icandelo7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.1
Akukho nanye kwimikhombandlela eya kusilela ngobude bokuqhekeka≥
I-10mm okanye ubunzulu bendalo eseleyo ≥0.5mm
Ubungakanani beMax.Crack (mm): Akukho bunzima bokubakho Ubuyiselo olushiyekileyo (mm): 0.31
EN15534-1: 2014 IsiHlomeloA EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.2
-F'max: Kuthetha -3300N, Min≥3000N
-Ukuchazwa phantsi komthwalo we-500N kuthetha≤2.0mm, Max≤2.5mm
Amandla okugoba: 27.4 MPa Modulus ye-elasiticity: 3969 MPa Ubuninzi bomthwalo: Kuthetha i-3786N, iMin 3540N ukuphambuka kwi-500N: Kuthetha: 0.86mm, Max: 0.99mm
EN 15534-1: 2014 Icandelo7.4.1 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.3
Isithuba esisebenzayo siyasebenza: Kuthetha ∆S≤10mm, Max ∆S≤13mm, Kuthetha ∆Sr≤5mm
Ububanzi: 330mm, Kuthetha ∆S 1.65mm, Max 1.S 1.72mm, Kuthetha ∆Sr 1.27mm
Ukudumba nokufunxwa kwamanzi
EN 15534-1: 2014 Icandelo8.3.1 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.5
Kuthetha Ukudumba: ≤4% kubukhulu, ≤0.8%
ububanzi, -0.4% ubude Ukudumba okuphezulu: ≤5% ubukhulu, .21.2% ububanzi, ≤0.6% ubude ukufunxwa kwamanzi: Kuthetha: ≤7%, Max: ≤9%
Kuthetha Ukuvuvukala: 1.81% ubukhulu, 0.22% ububanzi, 0.36% ubude Ukuvuvukala: 2.36% ubukhulu, 0.23% ububanzi, 0.44% ubude Ukuxutywa kwamanzi: Kuthetha: 4.32%, Max: 5.06%
EN 15534-1: 2014 Icandelo8.3.3 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.5
Ukufunxwa kwamanzi ngobunzima: Kuthetha ukuba yi-7%, iMax≤9%
Ukufakwa emanzini ngokobunzima: Kuthetha: 3.06%, uMax: 3.34%
Umgama okwandisiweyo okwandisiweyo kwe-thermal
EN 15534-1: 2014 Icandelo9.2 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.6 ISO 11359-2: 1999
50 × 10⁻⁶ K⁻¹
EN 15534-1: 2014 Icandelo7.5 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.7
Ubulukhuni bukaBrinell: I-79 MPa yereyithi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo: iipesenti ezingama-65
EN 15534-1: 2014 Icandelo9.3 EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.7 EN 479: 2018
Uvavanyo lokushisa: 100 ℃ Kuthetha: 0.09%
Egqithileyo Isilayidi esisezantsi sokuLondolozwa kweNkuni esiDityanisiweyo seWPC
Okulandelayo: Umbala oMkhulu oManzi ongenamanzi weplastiki weWPC oHlolo
Isikhokelo sokufakwa kweBhodi
Ngofakelo olufanelekileyo kunye nokhathalelo, iimveliso zeenkuni ziqinisekisiwe ukubonelela ngeminyaka yokuphila ngaphandle. Ukufezekisa ufakelo olungenangxaki lweemveliso zeenkuni:
-Cebisana ngeekhowudi zokwakha zengingqi ngaphambi kofakelo.
-Zazi ngemiyalelo yofakelo.
-Qiniseka ukuba unazo zonke izixhobo kunye nezinto eziyimfuneko-njengoko zidwelisiwe kwiphepha lokufundisa.
-Ungaze ulahle izinto zeenkuni xa usothula.
-Gcina kwindawo ethe tyaba kwaye ugqume ngezinto ezingagudluki.
-Xa uphethe iiplanga, qhubeka nokuxhasa okungcono.
Bhekisa kwimiyalelo yokufaka isikhokelo esongezelelweyo kwimveliso nganye.
Unonophelo kunye nokuPhatha iziKhokelo zokuHamba
Ukunciphisa ukukrwela, iincindi, ukusika kunye nemijelo, kunye nokugcina ubuhle beplanga. Landela le migaqo:
-Ungashenxisi iidesika zomnye nomnye xa uzihambisa. Xa uzisusa kwiyunithi, phakamisa iidesika kwaye uzimise phantsi.
-Ungazityibilikisi izixhobo okanye utsale izixhobo ngapha nangapha kweekhonkco ngexesha lokwakha.
Gcina umphezulu weepakethe ukhululekile kwinkunkuma yokwakha. Ukuthwala ubumdaka kunye nokwakhiwa kwenkunkuma kuwo wonke umphezulu, onegalelo ekukrwemeni komhlaba.
-Ukuba usebenza ngemveliso yeenkuni okanye nasiphi na isixhobo sokwakha, qiniseka ukunxiba iimpahla ezifanelekileyo kunye nezixhobo zokhuseleko.
-Zizo zonke iimveliso zomthi, izixhobo zomgangatho zokusebenza zinokusetyenziswa, ngokwemiyalelo yomenzi esebenzayo.
-Scrap inokulahlwa ngobutyobo obuqhelekileyo bokwakha.
-mthi unokuxhathisa ngokutyibilika okumanzi okanye owomileyo.
-imithi inesakhelo sokufihla esakhelwe ngaphakathi kwaye kulula ukufaka iiklip zomthi.
-Sebenzisa ubuncinci # 8 x 2-1 / 2 "ekumgangatho ophezulu oqatywe, insimbi engenasici okanye isiqwenga somgangatho.
-Ukubumba kwangaphambili kuyadingeka kwimozulu ebandayo kwaye xa ungaphakathi kwe-1-1 / 2 ”yokuphela komgangatho
-Ungasebenzisi iglu okanye i-caulk ukubopha iiplanga zomthi okanye ukutywina ngokudibeneyo phakathi kweeplanga ezimbini kunye nayiphi na enye indawo.Oku kuya kuthintela ukwanda kwendalo kunye nokuxinana kweeplanga kwaye kuya kuthintela ukuhanjiswa komgangatho.
Ukungena komoya ngokufanelekileyo kuyafuneka
-Ukunciphisa ukufuma okwakhiwa ngaphantsi komgangatho, kufuneka kubekho ubuncinci
ye-12 ”indawo ephezulu engakhuselekanga yomoya oqhubekayo macala omathathu enqanawo ukuvumela ukungena komoya.
Oku kufanele ukuba kubekwe nje emazantsi ezantsi edikeni.
-Kwezinye izicelo ezinqongopheleyo, kubandakanya iidesika ezakhelwe kwikona yangaphakathi, umoya owongezelelweyo uya kufuneka apho idilesi ihlangana khona nesakhiwo. Ukungaphumeleli ukubonelela ngokungenisa umoya okwaneleyo kungakhokelela ekusileleni komphezulu womgangatho kwaye kuya kuyiphelisa iwaranti.
Lisen Wood decking yoFakelo Imiyalelo
Ungagcina ixesha lokwakha kunye neendleko ngokwenza uyilo, cwangcisa uhlahlo-lwabiwo mali lwezixhobo eziyimfuneko ngokwenkqubo yoyilo. Ungakhetha izinto zakho ngokwendlela iminqweno yakho kunye neentlobo ezininzi iinkuni ozikhethelayo, ukwakha iinkuni, ukusebenza ngomatshini zingasetyenziswa ukusika, sawing, ukubhola njalo njalo.
Xa ufaka i-decking, okokuqala kuya kufuneka wenze lukhuni ukuzilungiselela kwangaphambili emhlabeni, emva koko ulungise i-joist kumhlaba owomileyo. Sicebisa inowuthi ye-joist ye-35-40cm. Isithuba seJoist sinokufutshane njengoko kuceliwe.
Cinga ngezithuba ezi-3cm kwisakhiwo xa ufaka umgangatho.
Ikhithi edibeneyo yokuhonjiswa kweenkuni ziimveliso zentsimbi engenasici. Ukubhola kufanele kube kuncinci kunobubanzi besikulufu esingu-3/4 ukuze kwandiswe izikhonkwane ezizibambayo.
Ukunkqonkqoza ngobunono ngokusetyenziswa kwesando serabha ngexesha lokwakha ukuqinisekisa isithuba esilinganayo kunye nomphezulu wolwakhiwo oluhle.
Ubude betyhidi buya kuchaphazeleka ngenxa yendawo enkulu yokwakha. Sincoma icandelo ukuba kubekho isithuba se-5mm xa icandelo elinqamlezileyo lifuneka.
Ungayidibanisa i-groove kunye ne-joist ngezikrufu zokuzibamba ukuba iziqwengana azifumaneki kunxibelelwano lwe-joist kunye nokuhombisa.
Khetha ibhodi ehambelana nayo ukuba ibe yibhodi ebukhali ngokobungakanani be-joist kunye nokuhombisa emva kokugqiba ulwakhiwo.
Ufakelo Amakhiwane kliphu zeplastiki
Xa ufaka i-decking, okokuqala kuya kufuneka wenze lukhuni ukuzilungiselela kwangaphambili emhlabeni, emva koko ulungise i-joist kumhlaba owomileyo. Sincoma isandi se-joist kwi-35-40 cm. Isithuba seJoist sinokufutshane njengoko kuceliwe.
Enye into yokudibanisa imithi kukuhonjiswa ngeplastiki. Ukubhola kufanele kube kuncinci kunobubanzi besikulufu esingu-3/4 ukuze kwandiswe izikhonkwane ezizibambayo.
Ungayidibanisa i-groove kunye ne-joist nge-self-tapping screws ukuba iziqwengana azifumaneki kuqhagamshelo lwe-joist kunye nokuhombisa.
Faka i-decking eqinileyo
Xa ufaka i-decking, okokuqala kuya kufuneka wenze lukhuni ukuzilungiselela kwangaphambili emhlabeni, emva koko ulungise i-joist kumhlaba owomileyo. Sincoma inqaku le-joist le-35-40cm. Isithuba seJoist sinokufutshane njengoko kuceliwe.
Cinga ngezithuba ezi-3cm ukuya kwisakhiwo xa ufaka umgangatho owomeleleyo Fakela umgangatho oqinileyo ngezikhonkwane ezibonakalayo kwaye ubeke isikhonkwane se-2cm emaphethelweni.
Q: Loluphi uhlobo lwesatifikethi osiphumeleleyo?
A: siqinisekisiwe ngeNkqubo yoLawulo lweMigangatho ye-ISO90010-2008, i-ISO 14001: Inkqubo yolawulo lokusingqongileyo ngo-2004, i-FSC ne-PEFC.
Q: Ngabaphi abathengi okhe waluphumelela uhlolo lomzi-mveliso?
A: Abanye abathengi abavela kwi-GB, Saudi Arabia, Australia, Canada, njl.ndwendwela umzi-mveliso wethu, bonke banelisekile ngumgangatho kunye nenkonzo yethu.
Q: Injani inkqubo yakho yokuthenga?
A: 1 khetha izinto ezifanelekileyo esizifunayo, jonga umgangatho wezinto ezilungileyo okanye hayi
2 jonga izinto ezihambelana nenkqubo yethu kunye nesatifikethi
3 ukwenza uvavanyo lwezinto, ukuba upasile, uya kubeka iodolo.
Q: Uthini umgangatho wabanikezeli benkampani yakho?
A: Zonke kufuneka zihambelane nokuma kwemfuno yethu yefektri, enje nge-ISO, enobume bendalo, umgangatho ophezulu, njl.
Umbuzo: Usebenza ixesha elingakanani ukusebenza kwakho? Ungayigcina njani imihla ngemihla? Yintoni amandla eseti nganye yokufa?
A: Ngokuqhelekileyo isikhunta esinye sinokusebenza iintsuku ezingama-2-3, siya kugcina emva komyalelo ngamnye, umthamo wesethi nganye uhlukile, kwiibhodi eziqhelekileyo ngolunye usuku ngu-2.5-3.5ton, iimveliso ze-3D zi-2-2.5tons, co- Iimveliso ze-extrusion zii-1.8-2.2tons.
Q: Zeziphi izixhobo zovavanyo onazo?
A: Umzi-mveliso wethu unesixhobo sokuvavanya ipropathi, ukuvavanya umlilo, ukuvavanya isiliphu, Ubunzima, njl.
Q: Yintoni na inkqubo umgangatho wakho?
A: Ngexesha lokwenziwa, i-QC yethu iya kujonga ubungakanani, umbala, umphezulu, umgangatho, emva koko baya kufumana isampulu yeqhekeza lokwenza uvavanyo lwepropathi. Kwakhona i-QC iyakwenza emva konyango ukukhangela ukuba kukho ingxaki engabonakaliyo kuyo Xa besenza unyango emva konyango, baya kujonga umgangatho.
Q: Sithini isivuno sakho semveliso? Yenziwe njani loo nto?
A: Imveliso yethu yesivuno ingaphezulu kwe-98%, kuba siya kuwulawula umgangatho ekuqaleni, ukusukela ekuqaleni kwemathiriyeli, zona i-QC ziya kulawula umgangatho xa zisenziwa, kunye negcisa liya kujonga kwaye lihlaziye ifomula rhoqo.
Q: Lide kangakanani ixesha lokuphila kweemveliso ze-WPC?
A: Imalunga nama-25-30 eminyaka phantsi kweemeko ezifanelekileyo.
Q: Leliphi ixesha lokuhlawula oza kulamkela?
A: Ixesha lokuhlawula yi-T / T, i-Western Union njalo njalo.
Anti-umhlwa WPC decking
Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC
ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo
Iibhodi zokuHamba zeWPC
WPC decking umgangatho
Yangaphandle Garden Weather Resistance WPC Elegant P ...
3D nzulu Embossed okungangenwa edityanisiweyo WPC Hollo ...
3D iinkuni iinkuni engangenwa umlilo edityanisiweyo W ...
Quality High Ihowuliseyili Garden Bench Wood Plasti ...
Manzi Wood edityanisiweyo Plastic Co-extruded W ...
Okungangenwa Wooden WPC Flower Pot Kuba ...
WPC decking umgangatho, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC nokwadala, WPC decking ngaphandle,